नेकपा नेताहरूले घाँटीमा झुन्ड्याए कोरोना... :: समिक्षा अधिकारी :: Setopati
नेकपा नेताहरूले घाँटीमा झुन्ड्याए कोरोना 'जन्तर', विज्ञ भन्छन्- यो प्रमाणित होइन, भ्रम छर्छ
नेकपा स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपाने घाँटीमा झुन्ड्याएको 'कोरोना ब्लकर कार्ड' देखाउँदै। तस्बिरः सन्जिब बगाले/सेतोपाटी
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जारी स्थायी समिति बैठकमा शुक्रबार सीमा विवादबारे छलफल भयो। आगामी दिनमा एमसिसी परियोजना र पार्टीका अन्य आन्तरिक विवाद पनि छलफलमा आउलान् नै। यसबाहेक यो बैठकले कोरोना भाइरससँग जोडिएको एउटा भ्रमलाई पनि बाहिर ल्याइदिएको छ।
शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित प्राय: नेताहरूको घाँटीमा नीलो रङको कार्डजस्तो झुन्डिएको देखिन्थ्यो। कार्यालयका कर्मचारीले व्यक्तिगत परिचयपत्र झुन्ड्याएजस्तो देखिने यो कार्ड आखिर के हो?
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले 'कोरोना भाइरस नजिक आउन नदिने' भन्दै बैठकमा उपस्थित नेताहरूलाई उक्त कार्ड वितरण गरेको एक स्थायी समिति सदस्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
'माधव (नेपाल) कमरेडले दिनुभएको हो, जापानमा पनि यस्तो कार्ड प्रयोग हुन्छ रे। यसलाई घाममा देखाउन हुँदैन रे,’ नेकपा स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले आफ्नो घाँटीको कार्ड देखाउँदै भने, 'मलाई त यो केटाकेटीलाई भूतप्रेत नलागोस् भनेर लगाइदिने जन्तरजस्तै लागेको छ। काम गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन, बेसारको धूलोजस्तै हुने हो कि!’
'भाइरस ब्लकर' भनिने यस्तो कार्ड झुन्ड्याएर हिँड्दा कोरोनाबाट जोगिन्छ भन्ने वैज्ञानिक रूपले प्रमाणित तथ्य होइन। तर, नेताहरूको पहुँचमा पुगिसकेपछि ढिलोचाँडो यो कार्ड जनस्तरमा पनि फैलिनसक्छ। यसले अनाहक पैसा खर्च हुने त छँदैछ, 'जन्तर' लगाएर ढुक्क भएर हिँड्दा झन् कोरोना सल्किने हो कि भन्ने डर पनि छ।
हामीले यसबारे सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनलाई सोध्यौं। उनले त भाइरस रोक्ने भनिएको र सत्तारूढ दलको बैठकभित्र प्रयोगमा आइसकेको कार्डबारे सुनेकै रहेनछन्।
'चर्चा गरिएजस्तो भाइरस ब्लकर कार्डबारे मैले सुनेको छैन। जहाँसम्म लाग्छ, यस्तो कुनै कार्ड प्रमाणित भएको छैन,’ डाक्टर पुनले भने, 'नभए संसारभरि यति ठूलो महामारी फैलिने नै थिएन। लकडाउन गर्नुपर्ने र कडा सामाजिक दुरीको आवश्यकता नै किन पर्थ्यो?’
उनले अगाडि भने, 'विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पनि यसबारे कुनै जानकारी दिएको छैन, त्यसैले यो कार्ड भाइरस नियन्त्रक हो भनेर भन्न सकिन्न। प्रमाणित नभएको अवस्थामा भोलि सर्वसाधारणले धमाधम लगाएर हिँड्न थाले के गर्नु? यसले भ्रम छर्छ। यसबारे नेताहरूले सोच्नुपर्ने हो।’
भाइरल विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी पनि यस्तो कार्डबारे अनभिज्ञता व्यक्त गर्छन्।
'कुनै कार्डले भाइरस हटाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। यस्तो कुनै कार्ड छैन होला, छ भने पनि प्रमाणित भएको थाहा पाएको छैन,’ उनले भने।
नेकपा नेताहरूले लगाएको भाइरस ब्लकर। तस्बिरः विप्लव भट्टराई
यस्तो संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले पुष्टि नगरेको कार्ड सत्तारूढ दलको बैठकसम्म कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। नेता नेपालले वितरण गरेको कार्ड 'बियोन्ड द वाल ट्रेडिङ' ले बिक्री गरेको हो। नेपालले यही कम्पनीबाट कार्ड खरिद गरेर नेताहरूलाई बाँडेको कम्पनीका सञ्चालक विप्लव भट्टराईले पुष्टि गरे।
'मलेरिया र डेंगी नियन्त्रण गर्न बेगन, मोर्टिनजस्ता धुप जसरी प्रयोग गरिन्छ, कोरोना निन्त्रणमा भाइरस ब्लकर पनि त्यसरी नै प्रयोग गर्ने हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रचार गरिएजस्तो यो कोरोनाको औषधि भने होइन।’
कार्डबाट निस्किने क्लोरिन अक्साइड नामक ग्यासले वरपरका भाइरस नियन्त्रण गर्ने उनको दाबी छ। 'यो कार्ड लगाएर आइसोलेसन वार्ड जान हुन्छ,' उनले भने, 'तर, कोरोना लागेको मान्छेसँगै बस्दा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ सरासर भ्रम हो।’
यो कार्डको पछाडि ८ बुँदामा प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने जानकारी उल्लेख छ। कार्ड छालामा छुवाउन हुँदैन, पानीमा भिजाउन हुँदैन र राति सुत्दा लगाउन हुँदैन। कसरी र कति दिन प्रयोग गर्ने भनेर पनि त्यसैमा लेखिएको छ।
कम्पनीले सार्वजनिक विज्ञापन नगरेको बताउँदै भट्टराईले भने, 'जमघट हुने ठाउँमा प्रयोग गर्न यस्तो कार्ड पनि उपलब्ध छ है भनेपछि माधव कमरेड हामीसँग लिनुभएको हो।’
पछिल्लो छ महिनामा संसारभरि कोरोना भाइरस लाग्नेको संख्या झन्डै १ करोड पुगेको छ भने ४ लाख ९२ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। संसारभरका वैज्ञानिक भाइरस रोक्ने खोप बनाउन अनुसन्धानरत् छन्। यस्तो संकटको घडीमा कुनै पनि देशले कोरोना भाइरस रोक्ने भन्दै यस्तो कार्ड प्रयोगको अनुमति दिएको छैन।
घाँटीमा कोरोना 'जन्तर' झुन्ड्याएका नेकपा नेता गणेश साह। तस्बिर: सन्जिब बगाले/सेतोपाटी
कम्पनीले भनेजस्तो 'जमघट हुने ठाउँमा' कार्ड प्रयोग गर्दा जोखिम कम हुने भइदिएको भए संसारका थुप्रै मुलुकले यसलाई आधिकारिक प्रयोगमा ल्याइसक्थे।
चीनमा बनेको उक्त कार्डबारे बेइजिङकै एक समाचार संस्था 'सिजिटिएन' ले यसको प्रयोग घातक हुनसक्ने बताएको छ।
'प्याकेटमा प्रयोग गरिएको क्लोरिन अक्साइड ग्यास लामो समयसम्म प्याकेटमा रहन सक्दैन। कार्ड प्रयोग विधि सही नहुँदा ग्यास लिक हुनसक्छ। साथै, यो छालाको सम्पर्कमा आउँदा छाला डढ्ने र श्वासप्रश्वासमा समस्या ल्याउन सक्छ,’ सिजिटिएनले भनेको छ।
यिनै समस्याका कारण जापानको उपभोक्ता संरक्षण संस्थाले यसको प्रयोगमा रोक लगाएको उक्त समाचारमा उल्लेख छ।
सिजिटिएन लेख्छ, 'जापानमा कोरोना भाइरस रोक्ने भनिएका झूटा सामग्रीहरूको विज्ञापनमा रोक लगाइएको छ। त्यसमध्ये भाइरस ब्लकर पनि एक हो।’
यसरी वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि नभएको कार्ड नेताहरूले सार्वजनिक प्रयोग गरिदिँदा र त्यसको प्रचारप्रसारसमेत गर्दा सर्वसाधारणलाई भ्रम पर्ने र संक्रमणको जोखिम बढ्ने अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १२, २०७७, २२:५२:००